Ukufundisa Ubuholi | Ukuthuthukiswa Kobuholi | Okulandelayo
Ingabe uzizwa uqiniseka ngekusasa? Ingabe ujabule ngamathuba akho nebhizinisi lakho ngokuzayo?
Umqeqeshi wethu we-NextMapping ™ coaching uzokunikeza ngohlaka, ukusekelwa kanye nokuholwa ukwakha ikusasa lakho elingcono kakhulu. Wonke umuntu ophumelelayo usebenzisa umqeqeshi webhizinisi noma ubuholi bokuqeqesha ngendlela yomeluleki / umqeqeshi / umqondisi.
Our Abaqeqeshi bebhizinisi be-NextMping ™ abaqinisekisiwe uzosebenzisana nawe ukwakha isu, ukukhuthaza ikusasa lakho le-mindset yokusebenza futhi kukusize uthuthukise amakhono adingekayo kuwe ukuze uchume futhi udlulele ezikhathini ezisheshayo zomfundi nezokushintsha okusheshayo.
Izinga lokuphazamiseka eliqhubekayo lizoqhubeka nokukhula ngokwandayo - ozokuncintisana naye olandelayo ngusomabhizinisi onomqondo odale i-Air BNB, i-Uber, iDropbox neTesla. ”
Kunezinhlobo ezimbili zama-mindsets ...
… Abantu abanalo ngekusasa:
1. Ngizozikhathaza ngakho uma empeleni kungithinta / ibhizinisi… NOMA 2. Yilethe! Ngijabule ngekusasa futhi ngizokwenza konke engingakwenza ukuze ngilungele mina / iqembu lami / ibhizinisi. I-mindset yokuqala ingqondo yokushoda egxile ekuvikeleni isimo se-quo nokwesaba ushintsho. I-mindset yesibili i-mindset yobuningi egxile ekuthatheni isinyathelo futhi inikwe amandla ukwenza ibalazwe ngekusasa lakho elihle. Enye yezinselelo ezinkulu kubaholi, amaqembu kanye nosomabhizinisi ukuhlala bekhuthazekile futhi begxile kokuzayo. Abaholi abaningi bagxila kokungokoqobo kosuku nosuku, ukucisha imililo futhi bavame ukulahlekelwa ukugxila kombono noma baholele ekusaseni eliqhakazile. Ukuze bakhe abaholi bokuziphatha abazinzile nabaphindaphindekayo kudingeka babe necebo elisuselwa ekwakheni 'okulandelayo' okuphoqelelayo nokuziphendulela ukwenza izinguquko ezidingekayo ukuze zilungele ikusasa. Kunesayensi yenguquko kanti ososayensi abaziphetheyo bakhombe izinto ezibalulekile zokwenza izinguquko ezisimeme ngeso lekusasa. Lezo zinto ezibalulekile zifaka phakathi ukuzimisela ukuguquka, ukuguquguquka kwengqondo, izindlela ezintsha zokuziphatha kanye nokugxila kokucindezelayo 'kungani'.
Isebenza kanjani Ubuholi
Ku-NextMapping sinohlelo lokuqeqesha abaphathi olusiza abaholi, amalungu eqembu nosomabhizinisi ukuthi bathathe impumelelo yabo baye ezingeni 'elilandelayo'. Sisebenzisa izinyathelo eziyisithupha ze-NextMapping ukuthuthukisa uhlelo lomqeqeshi ngokwezifiso oluqala lapho ukhona manje nokuthi ufuna ukuya kuphi. Siqala ngokuhlaziywa kwesimo sakho samanje ngenqubo yethu ye-Discover nakuhlelo lwakho lonke lokuqeqesha ubuholi sisiza ekuboneni amandla nezindawo zamathuba wokuthi wandise ukusebenza kwakho nemiphumela. Abaqeqeshi bethu bangabachwepheshe be-NextMapping abaqinisekisiwe futhi basebenzisa indlela yethu ehlukile yokuqeqesha / yokubonisana nokusebenza nawe. Ukuqeqeshwa kobuholi kudinga ukuthi wena njengomholi uzimisele ukuzihlola, uziphendulele ekwenzeni ushintsho futhi uzibophezele ekuholeni ushintsho namaqembu akho. Njengomqeqeshi wakho wobuholi sikuphendulela ekuphenduleni ezinhlosweni zakho, sisebenzisana nawe ukuze Senze amasu amasha, sikusiza ukwenza imephu yohlelo lokwakha ikusasa olifunayo. Usuvele uphumelele! Abaholi abaphumelele kakhulu batshala imali yokuba nombono wangaphandle nokusekelwa komqeqeshi wobuholi. Ukuthi usuvele ukuqeqeshelwe ubuholi noma cha singakusiza ukuthi ufeze izinhloso zakho ezichazayo.
Amasu ethu wokuhlanganisa
Amasu ethu wokuhlanganisa afaka isayensi, idatha, amakhono abantu nenqubo yokwenza izinguquko ezinamandla ezihlala njalo.
Lapha lapha kwi-NextMapping ™ sinenqubo efakazelwe kanye nendlela yokufundisa ngobuholi ukukusiza:
Zula ijubane elisheshayo lokushintsha nokuphazamiseka okuqhubekayo ngokuzethemba futhi kalula
Yakha amakhono akho okusungula nesikhathi sangempela
Faka futhi izinselelo zakho ezinkulu emathubeni akho amakhulu
Thola umongo omkhulu kokuthi 'kungani' nokuthi yini okulandelayo ngawe nebhizinisi lakho
Hlaziya kabusha futhi uthuthukise i- "OS" (mindset) egxile kuningi futhi unikeze ubuholi boshintsho ngombono okhuthazayo wesikhathi esizayo
Hola amaqembu akho nenkampani ngamasu akhulisa ukukhuthaza abasebenzi, ukwethembeka kanye neminikelo
Qamba ukulethwa kwensiza yamakhasimende ukudala abalandeli bomkhiqizo abaza inkampani yakho
Ukusiza amasu wokufaka izinombolo ukukhulisa ukusebenza kwakho kanye nebhizinisi
Umbuzo omkhulu okufanele uzibuze wona
"Yini okudingeka ukuthi siyiguqule ukuze siqhubekele phambili kakhulu ezinhlosweni zethu nasemiphumeleni yethu onyakeni owodwa kusukela manje?"
Usuvele uphumelele - FUTHI ukusebenzisa ukuqeqeshwa kobuholi be-NextMapping ™ kungaqinisekisa ukuthi uzokwenza inqubekela phambili efana nezinhlelo zakho ezibekwe kahle kakhulu. Iqiniso ngukuthi kungenzeka ukuthi ugijime ngokushesha ngangokunokwenzeka, amandla akho asuka ekukhungathekeni uye ekukhuthazelweni iphethini ephindaphindwayo futhi uyazi ukuthi ukuba nezikhathi eziningi zokugqugquzela nokwenza okugxile kuzokuholela ezinhlosweni zakho. Ungazenzela wena neqembu lakho izethembiso ezingatholakali ngenxa yokushoda kwesikhathi noma ukuntuleka kokubekwa phambili. Okuthi 'yini' okudingeka kushintshe ukugxila ekwakheni ikusasa lakho elihle ngosizo lozakwethu oziphendulela, umqeqeshi webhizinisi le-NextMapping ™. Ukuqeqeshwa kwethu kobuholi be-NextMapping ™ kusiza abaholi abanjengawe besebenzisa indlela yethu yomqeqeshi ye-NextMapping ™ ukukusiza ukuthi ufeze izinhloso zakho. Sithumele i-imeyili ku- michelle@NextMiling.com ukubhuka isikhathi sakho sesincomo sokuncoma.
Cabanga ukuthi ukuhola kwethu ubuholi yisisombululo esingcono kakhulu kuwe?
Sikukhulumile - finyelela lapho singathanda ukuxhumana nawe.